SOM-J/Land-Kisima-R/wasaare-Xassan cali kheyre & Wafdi Uu-Hoggaaminayo Oo Kismaayo Soo-Gaaray!!…Warbixin iyo Sawirro… | Allkisima.com
Kismaayo;-(Allkisima)-R/Wasaaraha X.F.SOMALIA Dr:-Xassan Cali Khayre iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa galabta gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka J/hoose, waxaana garoonka ku soo dhoweeyey dadweyne aad u badan, iyo Maamulaha degmada kismaayo (.Mr-Axmed Madoobe) ku-xigeenadiisa iyo Rag kale oo Maamulkiisa ka tirsan.
Wafdiga R/Wasaaraha ayaa waxaa uga soo horeeyey magaalada Kismaayo wafdi kale oo uu hoggaaminayo R/Wasaare ku xigeenka oo ay ka mid ahaayeen Golaha Wasiirrada qaarkood kuwaas oo dhammaantood ka qeyb geli doona Shirka golaha wasiirrada oo maalinta bari ah ka dhici doona Kismaayo, kaas oo markii ugu horeysay lagu qabanayo meel ka baxsan Caasimadda.
Dhanka kale Axmed madoobe ayaa sheegay in R/Wasaaraha iyo Golihiisa Wasiirrada ay ku soo dhoweynayaan Kismaayo isla markaana shacabka xilligan kismaayo ay si buuxda u taageersan yihiin dedaalada ay dawladdu waddo ee ku aaddan howl-gelinta Hay’adaha dawladda, wuxuuna tilmaamay in shirka ka dhacaya kismaayo uu Xukuumadda u fududeynayo gudashada Waajibaadkeeda iyadoo la dhegaysanayo shacabka.
Dhinaca kale R/Wasaare Xassan Cali Khayre ayaa isna dhankiisa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay soo dhoweynta ballaaran ee shacabka iyo hoggaanka Maamulka magaalada kismaayo u sameeyeen isaga iyo wafdigiisa, wuxuuna tilmaamay in inta uu ku sugan yahay magaalada uu la kulmi doono qeybaha kala duwan ee bulshada.Kismaayo markii ugu horreysay.
Waxaana hadal kooban oo uu jeediyey ka mid ahaa:-
Sidoo kale R/Wasaaraha ayaa sheegay in Xukuumaddu mudnaan gaar ah ay siinayso in xukunku uu gaaro meelaha ka durugsan caasimadaha, isla-mar ahaantaana xilligan la joogo waqtigii Wadajir loo wajihi lahaa ka shaqeynta danta guud. dawladduna ay tahay shaqaale ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed.
Ugu dambeyntiina wafdiga uu hoggaaminayo R/Wasaaraha oo ka kooban dhammaan golaha Wasiirrada ayaa inta ay joogaan kismaayo waxay kulamo la yeelan doonaan Wasaaradaha ay shaqo-Wadaagta yihiin iyo hoggaanka J/land,